Soosaarayaasha taageerada dhismaha , Alaab-qeybiyeyaasha - Warshada taageerada Dhismaha Shiinaha
Saddex qaybood oo biyo joojin ah
Sharraxaadda Product >>> The vertebral jidhka nooca vertebral biyaha joogsiga wareeg ah waxaa qiyaas ahaan loo qaybin karaa saddex qaybood: laba ulood oo dibadda ah iyo hal ul gudaha. Waxay leedahay qaab-dhismeedka fudud iyo isticmaalka habboon. Usha dibaddana dib ayaa loo warshadayn karaa marka la kala furfuro. Dhismaha dambe, kaliya qaybta dhexe ee daboolka ayaa loo baahan yahay in la iibsado, taas oo leh faa'iidooyinka yaraynta qashinka iyo yaraynta kharashka alaabta; Iyo hagaajinta hufnaanta shaqada iyo tayada dhismaha ee la taaban karo. Qaybta dhexe ee gudaha ...
Aluminium dhinta pin gabal aluminium dhinta pin gabal
Saxan ka-hortagga slide of scaffold
Sharaxaada Alaabta >>> Codsiga alaabta: saxan ka hortag ah kalluunka kalluunka waxaa badanaa loo isticmaalaa xaaladaha cimilada adag ama si wadajir ah loo isticmaalo mishiinada dhismaha, sida tas-hiilaadka leh wasakhowga saliidda, barafka iyo barafka, simbiriirixan, gariirka iyo mashiinada cilmi-baarista sayniska iyo qalabka cimiladu liidato. shuruudaha. Xaaladahan, aad bay muhiim ugu tahay hubinta badbaadada shaqaalaha. Alaabooyinka sibidhka lidka ku ah waxay kaliya buuxinayaan shuruudahan, kuwaas oo aan hubin karin oo kaliya hawlgalka caadiga ah, laakiin sidoo kale e ...
Taageerada sare iyo taageerada hoose
Sharaxaada Alaabta >>> Qeexida is-daba-mareenka ayaa qeexaya in dhererka kordhinta ee saldhigga la hagaajin karo iyo daboolka taageerada la hagaajin karo ee jir taageero buuxda waa inuusan dhaafin (300) mm, iyo dhererka la geliyo usha toosan waa inuusan ka yarayn (150) mm. Jacking, oo ah qalab dhisme oo lagama maarmaan ah oo muhiim u ah geeddi-socodka kacsiga iyo isticmaalka, ayaa door muhiim ah ka ciyaara. Waxay ka ciyaartaa jacking sare iyo jacking hoose. Magacyada jacking way ku kala duwan yihiin meesha...
Sharaxaada badeecada >>> 1. Horudhac taageero bir ah oo la hagaajin karo: Taageerada birta ee la hagaajin karo (tiirka birta) waxay ka kooban tahay dabool hoose, intubation sare iyo qalab la hagaajin karo. Intubation sare waxaa lagu qoday godad bolt siman si siman u bannaan, Qaybta sare ee daboolka waxaa la siiyaa gacan silig la hagaajin karo, kaas oo si dabacsan u hagaajin kara dhererka kala duwan ee tiirka, iyo rakibidda waa ku haboon oo degdeg ah, gaar ahaan ku habboon qaab-dhismeedka deegaanka. dhismayaasha Supp...
Taageerada dhismaha, taageerada birta
Sharaxaada badeecada >>> 1. Horudhac taageero bir ah oo la hagaajin karo: Taageerada birta ee la hagaajin karo (tiirka birta) waxay ka kooban tahay dabool hoose, intubation sare iyo qalab la hagaajin karo. Intubation sare waxaa lagu qoday godad bolt siman si siman u bannaan, Qaybta sare ee daboolka waxaa la siiyaa gacan silig la hagaajin karo, kaas oo si dabacsan u hagaajin kara dhererka kala duwan ee tiirka, iyo rakibidda waa ku haboon oo degdeg ah, gaar ahaan ku habboon qaab-dhismeedka deegaanka. dhismayaal Suppo...
Jiid gabal stereo
Sharaxaadda Product >>> Qaybta kala qaybsanaantu guud ahaan waxaa loo isticmaalaa qalab kaabayaal ah oo taageero qaab shaqo ah oo loogu talagalay qaybaha toosan sida tiirarka derbiga ee ay taageerayaan qaab-dhismeedka birta yar Guud ahaan, qaabka tab jiidka waa qayb ka mid ah 10-12 xoojinta dhexda. Mid ama labada cidhifba waxaa lagu lingaxaa go'yaal yar oo bir ah oo godad leh, kuwaas oo lagu dhejiyay isku-dhafka u dhexeeya laba nooc oo bir ah. Godadka go'yaasha birta ah waxay la jaanqaadaan godadka qaab-dhismeedka waxayna ku xiran yihiin oo ay ku dhejiyaan xajin U-qaabeeya...
Sharaxaadda Product >>> Kala-soocida kala qaybsanaanta waxaa loo isticmaalaa xidhitaanka u dhexeeya qaabka gudaha iyo dibedda ee derbiga si uu u qaado cadaadiska lateral iyo culeysyada kale ee shubka, si loo hubiyo in kala fogaanshaha u dhexeeya gudaha iyo dibedda gudaha uu la kulmi karo shuruudaha naqshadeynta, iyo sidoo kale waa dhammaystirka qaab-dhismeedka iyo qaab-dhismeedkeeda taageerada. Sidaa darteed, habaynta boolal kala jaban waxay saameyn weyn ku leedahay daacadnimada, qallafsanaanta iyo xoogga qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka Shafka
Aluminium xidhe template ah
Sharaxaada badeecada >>> Astener guud ahaan waxa loola jeedaa qaybta isku xidhka dhexe ee isku xidhaysa laba qaybood, taas oo inta badan loo isticmaalo dhexroorka dibadda ee injineernimada dhismaha xidheyaasha), xidhidhiyeyaasha wareega (xireyaasha dhaqaaqa iyo kuwa caalamiga ah), xidheyaasha dabada (xadhiga toosan iyo xidhidhiyeyaasha tooska ah), iwm Faa'iidada: Waqti-badbaadinta: Qaado ...
Sharraxaadda Alaabada >>> Is-rog-rog-rogiddu waa nooc cusub oo qolof ah, kaas oo laga keenay Yurub sannadihii 198-aadkii. Waa badeeco la cusboonaysiiyay ka dib saqafka xidhidhka baaquli Waxa kale oo loo yaqaan nidaamka scaffold chrysanthemum disc, plug-in disc scaffold nidaamka, wheel disc scaffold nidaamka, xoqida saxanka, lakabka lakabka iyo jir Leia, sababtoo ah mabda'a aasaasiga ah ee qashinka waxaa alifay shirkadda layher ee Jarmalka waxaana sidoo kale loo yaqaannaa. "Leia frame" ee dadka t...